Home Wararka Galmudug oo dib loogu celiyay dhaqankii burburka iyo Qoor-Qoor oo ka daneeystay
Galmudug oo dib loogu celiyay dhaqankii burburka iyo Qoor-Qoor oo ka daneeystay
Labaatankii sano ee la soo dhaafay deegaanka Galmudug waxa uu ahaa degaanada ugu liita guud ahaan dalka Soomaaliya. Waxaa ay ka hareen dowlad goboleedyada kale sida dhanka horumarka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxaana taas ugu wacnaa hogaanka Galmudug oo xili kastaa loo doorto koox aan u naxeeynin dadka iyo degaanka Galmudug.
Dhowr bilood ka hor markii MW Qoor Qoor la doortay waxa jirtay rajo ah in uu ka duwan yahay hogaankii isaga ka horeeyay ee dhulka la galay, isla-markaana lugooyay dadka reer Galmudug. Nasiib xumo waxaa hada soo ifbaxaya in MW Qoor-Qoor iyo golahiisa wasiirada ay mareen wadadii ay mareen kuwii isaga ka horeeyay.
Ilaa iyo markii la doortay Qoor-Qoor waxa uu waqtigiisa intiisa badan ku lumiyay xaruna ka dhigtay magalaada Muqdisho iyo in uu ka shaqeeyo dano isaga iyo kooxa ku wareegsan u gaar ah. Golahiisa wasiirada waxa ay deegaan ka dhigteen magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho.
Waxa nasiib xumo ah in aqoonyahanadii iyo waxgaradkii reer Galmuudg ay daawanayaa burburka lagu wado Galmudug. Ma jirto cid su’aal iska weydiinayso dhaqanka waalida ah ee uu ku jirto Qoor Qoor. Hogaank xumida uu ka wado deegaanka Galmudug. Waxa uu jeebka ku qaatay howlihii Galnudug, wax shaqo ah oo ka socda degaankana ma jiro.
Shacabka Galmudug, ma sidaan ayaa ay ku daawanayaan dhaqanka Qoor-Qoor iyo burburka ku socda Galmudug?